တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ကွန်မန့်ထဲက စာ …
Posted by မေဓာဝီ at 6:42 AM
ကိုဏီသစ်ရဲ့ သဘောထားကြီးတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို လေးစားမိပါတယ်။
9/01/2007 2:47 AM
ိအမ လာလည်သွားတယ်။ ပြတ်သားတဲ့ အမကို လေးစားတယ်။
ကျွန်တော် ဟာ အမတို့နဲ. ဆန်.ကျင်တဲ. နေရာမှရှိ ချင် ရှိမယ်။ အမစိတ် ဓာတ် ကိုလေး စားပါတယ်။
9/01/2007 7:46 PM